न्यान्सी पेलोसीः जसको कारण डोनल्ड ट्रम्पको विरासत हल्लिरहेको छ - Durbin Nepal News
न्यान्सी पेलोसीः जसको कारण डोनल्ड ट्रम्पको विरासत हल्लिरहेको छ प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्ने पहिलो अमेरिकी महिला, न्यान्सी
बद्रि गौतम ६ पुष २०७६, आईतवार ०४:३४
बद्रि गौतम, दूरबिन नेपाल, न्युयोर्क
अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री हिलरी क्लिन्टनले टाइम म्यागेजिनमा न्यान्सीको प्रशंसा गर्दै लेखेकी छिन “ यदि तपाई केही काम फत्ते गर्न चाहनुहुन्छ भने एक व्यस्त महिलालाई भन्नुस, यतिबेला त्यो महिला न्यान्सी हो ” । त्यसैगरि अमेरिकाको ओहायो राज्यकी डेमोक्रयाट नेतृ सानन फ्रेसआवरले आफ्नो ट्वीटमा सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा प्रभावकारी र सफल महिला भनेकी छिन । डेमोक्रयाटहरुले त न्यान्सीलाई अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी महिलाको रुपमा चित्रण गर्ने नै भए । के साँच्चै न्यान्सी त्यति प्रभावकारी महिला हुन त ? तर यो सवालको जवाफ उनले अमेरिकी प्रतिनिधि सभामार्फत राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर दिएकी छिन ।
यतिबेला न्यान्सीको सबैभन्दा कटु आलोचक कोही छ भने ती व्यक्ति हुन राष्ट्रपति ट्रम्प । त्यसैले ट्रम्पले आफ्नो ट्वीटमा सभामुखको आलोचना गर्दै भनेका छन “न्यान्सी पेलोसी सिनेटको साथ क्व्डि प्रो को खोज्दैछिन, किन हामी उनलाई इन्पेच (महाअभियोग) गर्दै छैनौं ?” हुनपनि हो न्यान्सीकै आत्मविस्वास र साहसले ट्रम्पलाई नैतिक संकट परेको छ । भलै ट्रम्प जस्ता स्वभाव भएका व्यक्तिका लागि तल्लो सदनको महाअभियोगले कुनै नैतिक संकट नपर्ला । ट्रम्पहरुकालागि प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग केवल अजेण्डा बिहिन डेमोक्रयाटहरुको फण्डा मात्र होला । तर इतिहासको पानामा भने तल्लो सदनबाट महाअभियोग लगाउने तेस्रो व्यक्ति डोनल्ड ट्रम्प नै हुन भनेर लेखियो, भावी पूस्ताले अवस्य पढ्नेछ । हो यहि इतिहास कोर्न तथा ट्रम्पलाई महाअभियोगको दाग लगाउन सभामुख तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ न्यान्सी पेलोसीको अदम्य साहस र अनुभवले मात्र सकेको हो भन्नेमा विमती धेरैको नहोला । यिनै शाहसी राजनीतिज्ञ न्यान्सीको बारेमा जान्ने प्रयास गरिएको छ
को हुन त न्यान्सी ? जसले अमेरिकीमात्र होइन विश्वकै ध्यान तानिरहेकी छिन
हुन त न्यान्सी यदि क्लिन्टन परिवारकी हुन्थीन भने अघिल्लो पटक नै राष्ट्रपतिको दावेदार नै हुने थिइन होला । तर उनी पारिवारीक विरासत भन्दा पनि आफ्नै बलबुताको राजनीति गर्ने खेलाडी हुन भन्ने उनका विगतले प्रष्ट्याएका छन । न्यान्सी त्यसै प्रभावकारी बनेकी होइनन । उनले डेमोक्रयाटहरुको मात्र नेतृत्व गरेकी छैनन । अमेरिकाका जल्दा बल्दा सवालहरुमा आवाज बुलन्द गरेकी छिन । आप्रवासी, बन्दुक हिंशा तथा गर्भपतन जस्ता गम्भिर विषयमा बोल्ने तथा ओबामा केयरको स्थापना र विस्तारमा भुमिका खेल्ने अल्पसंख्यकहरुलाई न्याय दिलाउन लागिपर्ने महिलाको रुपमा पनि चिनिन्छिन । इराक युद्धको विरोधमा पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुससंगपनि पंगा लिने आंट गरेकी छिन । यस्तै अनुभवले न्यान्सीलाई पाको र अनभवी राजनीतिज्ञ बनाएको हो । सन २००७ देखि ११ सम्म सभामुख भइसकेकी न्यान्सीलाई डेमोक्रयाटिक दलले क्षमताकै कारण पुनः २०१९ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनायो । जसको सार्थकतालाई न्यान्सीले प्रष्ट्याइ रहेकी छिन । न्यान्सी प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्ने पहिलो अमेरिकी महिला हुन । सन १९४० मा अमेरिकाको बाल्टिमोरमा जन्मेकी न्यान्सीका बाबु आमा दुवै इटालियन नागरिक हुन भने अमेरिकी कंग्रेसमा यो उनको १७ उपश्थिती हो । राजनीतिक पृष्ठभुमिकी न्यान्सीका बाबु बाल्टिमोरको मेयरपनि बनेका थिए । सन १९८७ दखि सान फ्रान्सिस्कोबाट लगातार अमेरिकी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी पेलोसी कुनै बेला २५ धनी सांसदमा १३ औं नम्बरमा परेकी थिइन । पति पावल पेलोसी हुन भने पाँच बच्चाकी आमापनि हुन । आर्थिक हिसाबले अहिलेपनि धनी सांसद अन्तर्गत नै पर्ने पेलोसी राजनीतिको चानचुने खेलाडी होइनन भन्नेमा शंका रहेन । त्यसैले न्यान्सीले आफ्नो ट्वीटरको प्रोफाइलमा लेखेकी छिन “सभामुख, अमेरिकाको मध्यम वर्गको सुदृढिकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित, आमा, हजुर आमा अनि गाढा चकलेटको पारदर्शी ।
फोटो साभारः गुगल
६ पुष २०७६, आईतवार ०४:३४ मा प्रकाशित